Mpanamboatra sy mpamatsy Optical FTTH | China FTTH Optical Receiver Factory
ZHR1000SD FTTH avo lenta mpandray
1 Famaritana ny vokatra ZHR1000SD FTTH mpandray optika dia natao manokana ho an'ny tamba-jotra CATV FTTH. Ny tena mampiavaka azy dia ny fanjifana herinaratra ambany, ny fivoahan'ny AGC optika tsy miova, ny Volume kely ary ny fahamendrehana avo. Ny alàlan'ny akorandriaka alimo aliminioma, miaraka amina fanaraha-maso AGC mihodina ao anaty, rafitra mirindra ary famatsian-tsolika ivelany modular dia mahatonga ny fametrahana sy debugging tena mety. Izy io dia vokatra mety hananganana tambajotra FTTH CATV. 2. Fampisehoana vokatra 1. Manaiky ny maody GaAs ho RF ampli ...
Endri-javatra 1.Fifandraisana bandwidth: 45 ~ 1000MHz; 2.when ny hery optique fidirana dia -1dBm: famantarana analog: ny herin'ny optique output dia 67dBµV (OMI = 4%); Famantarana nomerika: ny herin'ny optique output dia 61dBµV, MER> 38dB (EQ OFF OFF); 3.Raha ny hery optique fidirana dia -10dBm: Famantarana nomerika: ny herin'ny optique output dia 43dBµV, MER> 30dB (EQ dia MATY); soso-kevitra ny elanelam-pahefana mahery vaika optika dia -10 ~ 0dBm. 4. Ity vokatra ity dia manana seranana fivoarana RF F-type F, Metric na Imperial izay faritan'ny ...
Mpandray optika tsy manara-penitra
Famaritana ZHR10P andiana CATV mpanova ho an'ny fahitalavitra nomerika, fibre mankany an-trano. Ity milina ity dia mandray ny fantsom-panafahana mandray optika avo lenta, tsy misy famatsiana herinaratra, tsy misy fanjifana herinaratra. Izy io dia fampidirana fampiharana ara-toekarena sy malefaka, fampiharana ny fibre amin'ny tambajotra an-trano. Misy karazany dimy ny fisafidianana maodely: Endri-javatra Fiasa bandwidth: 45-1000MHz; (1) Rehefa ny herin'ny optique optika dia - 1dBm: ① Famantarana analog: ny herin'ny optika output dia 68dBuV (OMI = 4%); ② Mihady ...
1. Overview ZHR10B andiana CATV mpanova ho an'ny fahitalavitra nomerika, fibre mankany an-trano. Izaho ny masininy dia mandray ny fantsom-panafahana optika avo lenta, tsy misy famatsiana herinaratra, tsy misy fanjifana herinaratra. Rehefa ny fivoahan'ny herinaratra optika fidirana Pin = -1dBm, Vo = 68dBuV, dia afaka mampihatra ara-toekarena sy mivaingana ny fampidirana tambajotra telo, fibre amin'ny rindranasa tambajotra an-trano. ZHR10B fisehoan'ny enamel, misy karazany roa ny safidy optika vita. 2. Toetra 1) Tsy mila herinaratra 2) Fehin-tànana miasa ...
FTTH mini Optical Receiver miaraka amin'ny WDM
Famaritana ZHR1000PD dia mpandray optique optika anatiny ao amin'ny WDM, natao ho an'ny fampiharana FTTP / FTTH. Izy io dia manome valiny matetika momba ny fahita matetika sy ny fanodikodinam-peo miaraka amin'ny tabataba ambany, ny faran'ny RF avo lenta ary ny fanjifana herinaratra ambany. Izy io dia maodely tokana vita amin'ny kofehy-kisoa ary azo alaina amin'ny safidy mpampifandray isan-karazany. Interface No Interface Description 1 RF OUT RF OUT1 F mpampitohy 2 RF OUT2 tsy voatery 3 PWR Power adaptatera port 4 PON 1490 / 1310mn interface data SC / PC ...
ZHR1000P FTTH mpandray optika
ZHR1000P series FTTH mpandray optique dia manana fahombiazana avo, hery optique ambany ary vidiny ambany ho an'ireo mpandraharaha CATV manome vahaolana avo lenta sy faran'izay tsara FTTH. ZHR1000PD indrindra famolavolana ho an'ny FTTP / FTTH fampiharana. Fahombiazana avo lenta, hery optique ambany ary ambany ny vidiny dia vahaolana FTTH safidy tsara indrindra ho an'ny MSO. Ny WDM natambatra ho an'ny signal video 1550nm sy signal data 1490nm / 1310nm ao anaty fiber iray. Taratra 1490nm / 1310nm amin'ny fampifandraisana fitaovana ONT. Tena mety izy ireo ...
ZHR1000MF FTTH Fibre Optical mpandray
Ny outline ZHR1000MF Mini Optical node dia avo lenta, azo atokisana, ambany ny fandaniana herinaratra kely amin'ny habe ary tsara ho an'ny tambajotran'ny Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). Endri-javatra • Miaraka amin'ny sivana tarika ary mandalo 1550nm fotsiny. • Frequancy 40MHz -1002MHz. • Fanamafisam-peo Gallium arsenide ampiasaina miaraka amin'ny mari-pahaizana fampisehoana tsara. • Misy seranana metric (na rafitra anglisy) seranana famoahana radio matetika ary seranan-tseranana DC12V ~ 15V tsy miankina DC. • Famonoana alim-bary vita amin'ny aliminioma kely, ...
Parameter Optic Feature CATV Asa onjam-peo nm 1260 ~ 1620 1540 ~ 1563 Mandalo ny halavan'ny onjam-peo nm 1310 sy 1490 Channel mitoka-monina dB ≥40 1550nm & 1490nm Andraikitra A / W ≥0.85 1310nm Mahazo fahefana dBm ≥0.9 1550nm & 1490nm + 2 ~ -10 Analog TV (CNR ＞ 45 Analogd TV (CNR) Fiverenana optika dB + 2 ~ -20 Digital TV (MER ＞ 29dB) ≥55 Optical fibre mpampitohy SC / APC LC / APC RF Feature Work Bandwidth MHz 47-1002 ...
ZHR1000M FTTH Fibre Optical mpandray
Outline ZHR1000M Mini Optical node dia avo amin'ny asany, tsara amin'ny fahatokisana, ambany amin'ny fandaniana herinaratra kely amin'ny habetsany ary tsara ho an'ny tambajotran'ny Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). Endri-javatra • Frequancy 40MHz -1002MHz. • Fanamafisam-peo Gallium arsenide ampiasaina miaraka amin'ny mari-pahaizana fampisehoana tsara. • Misy seranana metric (na rafitra anglisy) seranana famoahana radio matetika ary seranan-tseranana DC12V ~ 15V tsy miankina DC. • Famonoana alim-bary alimina kely, miendrika tsara tarehy, tsara ampiasaina any an-trano. • Ampiasao SC / ...
Fampiharana Fiber amin'ny tambajotra an-trano (FTTH). Endri-javatra ampiasaina amin'ny tambajotra fibre mankany an-trano. Fonenana alimina matevina. Fampidirana input SC / APC ary output RF miaraka amin'ny mpampitohy F vavy. Miaraka amin'ny mari-pamantarana herinaratra LED 2-dingana. Fidirana herinaratra -10 ~ + 3dBm Haavo haavo 75 ~ 80dBuV. Asan'ny AGC manorina. Fanamafisam-peo ambany dia vita amin'ny teknolojia fanosehana. Tena ambany ny fanjifana herinaratra ＜ 2.0W. Parameter Performance Unit Index Optical parameter Operation halavan'ny nm 1550 hery fampidinana dBm ...
FTTH Optical Receiver fananganana WDM ZHR860MD
Overview ZHR860MD dia fahombiazana avo sy azo itokisana avo optique. Izy io dia noraisina mpitsikilo optika amin'ny sehatra maro karazana, mahatsapa ny fifehezana mandeha ho azy (AGC) amin'ny haavon'ny RF output amin'ny signal signal input optique amin'ny sehatra mavitrika toy ny -10 ~ -3dBm ao amin'ny circuit. Endri-javatra ny fantsom-pifandraisana dia 47 ~ 1000MHz. Fivoarana mariky ny fantsom-pifandraisana RF iray tokana, mahomby sy azo ampiharina. Izy io dia manana tondro ho an'ny famatsiana herinaratra sy ny herin'ny optika. Fiasan'ny optical auto gain control (AGC). Miaraka amin'ny PO ...
1.Oviewview ZHR100L Mini Optical Node dia avo lenta, tsara amin'ny fahatokisana, ambany amin'ny fandaniana herinaratra, kely ny habe ary tsara ho an'ny tambajotran'ny Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). 2.Fitaovana 1) 1310nm sy 1550nm varavarankely miasa tsy voatery 2) Frequency 40MHz -1002MHz 3) amplifier Gallium arsenide ampiasaina miaraka amin'ny indostrian'ny fampisehoana tsara. 4) Misy rafitra metric (na rafitra anglisy) seranan-tseranana famoahana radio matetika ary seranan-tseranana DC12V ~ 15V tsy miankina DC. 5) Aluminium kely maty cast c ...